Ogeysiiska sharciga | Golaha Moobaylka
Movilforum.com waxaa iska leh shabakadda shabakadda Blog, shirkad leedahay AB Shabakadaha Internetka 2008 SL, CIF: B85537785, oo cinwaankiisu yahay:
Moodooyinka, foomamka iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqdaada: Bogga rasmiga ah ee Wakaaladda Isbaanishka ee Ilaalinta Xogta Suurtagalnimada ka noqoshada ogolaanshaha: Haddii ay dhacdo inaad oggolaasho u oggolaatay ujeedo gaar ah, waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto wakhti kasta, adigoon saameyn ku yeelan sharcinnimada daaweynta ee ku saleysan oggolaanshaha ka hor bixitaankeeda. Sida loogu dacwoodo Hay'adda Xakamaynta: Haddii aad u aragto inay dhibaato ka jirto habka AB Internet Networks 2008 SL ay u maamusho xogtaada, waxaad u gudbin kartaa cabashadaada Maamulaha Amniga ee Shabakadaha Internetka ee AB Internet 2008 XNUMX (kor ku xusan) ama hay'adda ilaalinta xogta taas oo u dhiganta, ahaanshaha Hay'adda Isbaanishka ee Ilaalinta Macluumaadka, midka lagu tilmaamay kiiska Spain.
Xogta la kala saaray Xogta la kala saaray ayaa la hayn doonaa iyada oo aan la tirtirin. Macluumaadka macaamiisha quudinta e-mayl: Laga soo bilaabo xilligan isticmaalaha iska diiwaangeliya illaa ay ka baxaan. Xogta macaamiisha ee warsidaha: Laga soo bilaabo xilligan isticmaalaha iska diiwaangeliya illaa ay ka baxaan. Xogta isticmaale ee ay soo gelisay shabakadaha AB Internet Networks 2008 SL bogagga iyo astaamaha shabakadaha bulshada: Laga soo bilaabo marka isticmaalehu bixiyo ogolaanshahooda ilaa ay ka noqdaan.
AB Internet Networks 2008 SL waxaa ka go'an adeegsiga xogta, si ixtiraamaan sirtooda iyo in loo adeegsado si waafaqsan ujeedadooda, iyo sidoo kale in la waafajiyo waajibaadkooda ah in la ilaaliyo lana waafajiyo talaabooyinka oo dhan si looga fogaado isbadal, lumis, daaweyn ama marin aan loo idman, iyadoo la raacayo qodobada Xeerka Boqortooyada ee 1720/2007 ee Diseembar 21 , kaas oo ansixiya Shuruucda loogu talagalay horumarinta Sharciga Dhaqanka 15/1999 ee Diisambar 13, ee ku saabsan Ilaalinta Xogta Shakhsiyeed. Waxaad damaanad qaadaysaa in xogta shakhsiga ah ee lagu bixiyay foomamku ay run tahay, lagana doonayo inay la soo xiriirto wixii isbeddel ah ee iyaga ku yimaada. Sidoo kale, waxaad dammaanad ka qaadaysaa in dhammaan macluumaadka la bixiyay ay u dhigmaan xaaladdaada dhabta ah, inay tahay mid casriyeysan oo sax ah. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad cusbooneysiisaa xogtaada marwalba, adoo mas'uul ka ah khaladka ama been abuurka xogta la bixiyay iyo waxyeelada ay keeni karto tan Shabakadaha Internetka ee AB ee 2008 SL mulkiilaha degelkan, ama dhinacyada saddexaad ay sabab u tahay isticmaalka ayaa sheegay.
AB Internet Networks 2008 SL waxay qaadataa talaabooyin amni oo macquul ah oo macquul ah si loo ogaado jiritaanka fayrasyada, weerarada xoog waxyeellada leh iyo cirbadaha koodhka. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in tallaabooyinka amniga ee nidaamyada kombiyuutarka ee internetka aysan gebi ahaanba la isku halleyn karin sidaas darteedna, AB Internet Networks 2008 SL ma damaanad qaadi karto maqnaanshaha fayrasyada ama walxaha kale ee sababi kara isbeddelada nidaamka kombiyuutarka. Qalabka) Isticmaalaha ama dukumiintiyada elektaroonigga ah iyo faylalka ku jira. Iyadoo ay taasi jirto, in la isku dayo dammaanad qaadaya amniga iyo asturnaanta macluumaadkaaga shaqsiyeed, websaydhku wuxuu leeyahay nidaam ilaalin nabadgelyo oo firfircoon oo ka warbixiya waxqabad kasta oo adeegsade iyo jebinta suurtagalka ah ee amniga macluumaadka isticmaalaha. Haddii wax xadgudub ah la ogaado, AB Internet Networks 2008 SL waxay qaadaysaa ogeysii isticmaalayaasha ugu badnaan 72 saacadood.
Dhammaan alaabooyinka iyo adeegyada lagu bixiyo websaydhka waxay tixraacayaan foomamka xiriirka, foomamka faallooyinka iyo foomamka diiwaangelinta isticmaalaha, rukhsadda wargeysyada iyo / ama amarrada iibsiga. Websaydhkani wuxuu had iyo jeer u baahan yahay oggolaanshaha hore ee dadka isticmaala si ay uga baaraandegaan xogtooda shaqsiyadeed ujeedooyinka la tilmaamay. Waxaad xaq u leedahay inaad ka noqoto ogolaanshahaagii hore wakhti kasta.
Webka iyo martigelinta: Websaydhku wuxuu leeyahay SSL TLS v.1.2 encryption kaas oo u oggolaanaya dirista xogta shakhsiga ah ee aaminka ah iyada oo loo marayo foomamka xiriirka caadiga ah, oo lagu marti galiyay server-yada AB Internet Networks 2008 SL ay qandaraas ka qaadatay Shabakadaha Occentus. Xogta laga soo ururiyey shabakadda: Xogta shakhsiga ah ee la ururiyey waxay ku xirnaan doontaa farsameyn otomaatig ah waxaana lagu dari doonaa faylasha u dhigma ee ay leeyihiin AB Internet Networks 2008 SL.
Foomka Jawaab-celinta: Shabakadda waxaa jira suurtagalnimada in isticmaaleyaashu ay uga tagaan faallooyinka daabacaadaha bogga. Waxaa jira cookie keydiya xogta uu bixiyay adeegsadaha si aysan ugu qasbin inay dib ugu soo galaan booqasha kasta oo cusub sidoo kale cinwaanka emaylka, magaca, websaydhka iyo cinwaanka IP-ga ayaa laga soo ururiyaa gudaha. Xogta waxaa lagu keydiyaa server-yada shabakadaha Occentus Networks. Diiwaangelinta Isticmaalaha: Lama ogola ilaa iyo inta si cad loo codsado. Foomka wax iibsiga: Si loo helo badeecadaha iyo adeegyada lagu bixiyo bakhaarradeenna internetka, isticmaaluhu wuxuu leeyahay foom iibsi oo ku xiran shuruudaha qandaraaska ee lagu qeexay siyaasadeena halka lagala xiriiri doono iyo macluumaadka lacag bixinta. Xogta waxaa lagu keydiyaa server-yada shabakadaha Occentus Networks. Waxaan ka soo aruurineynaa macluumaadka kugu saabsan inta lagu guda jiro howsha lacag-bixinta dukaankayaga. Macluumaadkan waxaa ka mid noqon kara, oo keliya maahan, magacaaga, cinwaankaaga, emaylkaaga, taleefankaaga, faahfaahinta lacag-bixinta iyo kuwa kale ee lagama maarmaanka u ah in la fuliyo amarradaada. Maareynta xogtaan waxay noo ogolaaneysaa:
Foomamka ku-qoridda joornaalka: Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay adeegsataa adeegga gudbinta wargeysyada Sendgrid, Feedburner ama Mailchimp, kaasoo kaydiya xogta emaylkaaga, magacaaga iyo aqbalaadda rukumashada. Waad ka saamixi kartaa joornaalka wakhti kasta adoo adeegsanaya xiriirin gaar ah oo ku taal salka alaab kasta oo aad hesho Email: Adeeg bixiyaha emaylkeena waa Sendgrid. Fariin deg deg ah: AB Internet Networks 2008 SL kuma bixiso adeeg fariin deg deg ah, sida WhatsApp, Facebook Messenger ama Line. Bixiyeyaasha adeegga lacag-bixinta: Adoo adeegsanaya shabakada, waxaad ka heli kartaa, xiriiriyeyaasha, degellada websaydhka-saddexaad, sida PayPal o karbaash, si loo bixiyo lacag bixinta adeegyada ay bixiso AB Internet Networks 2008 SL. Marna shaqaaluhu AB Internet Networks 2008 SL shaqaaluhu maheli karaan faahfaahinta bangiga (tusaale ahaan, lambarka kaarka deynta) ee aad siiso dhinacyada saddexaad.
Maqaallada ku jira websaydhka waxaa ku jiri kara waxyaabo ku jira gundhig (tusaale fiidiyowyo, sawirro, maqaallo, iwm.). Waxyaabaha ku duugan bogagga kale waxay u dhaqmaan si la mid ah sidii qof soo booqday soo booqday degelka kale. Websaydhadaani waxay soo aruurin karaan macluumaadka adiga kugu saabsan, isticmaal buskudyada, ku dhexjiraan raadinta qeybta saddexaad, iyo inay kormeeraan isdhexgalkaaga waxyaabaha ku jira, oo ay ku jiraan la socoshada isdhexgalkaaga waxyaabaha ku jira haddii aad koonto leedahay ama aad ku xiran tahay boggaas. Adeegyada kale: Adeegyada qaarkood ee lagu bixiyo websaydhadu waxay ka koobnaan karaan shuruudo gaar ah oo leh qodobbo gaar ah oo ku saabsan ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed. Waa lagama maarmaan in la akhriyo lana aqbalo ka hor inta aan la codsan adeegga su'aasha ku jirta. Ujeedo iyo sharciyeyn: Ujeedada laga shaqeynayo xogtaan waxay kaliya noqon doontaa in lagu siiyo macluumaadka ama adeegyada aad codsato.
Jiritaanka shabakadaha: AB Internet Networks 2008 SL waxay leedahay xog-warranno ku saabsan qaar ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu waaweyn internetka. Ujeedo iyo sharciyeyn: Daaweynta ay AB Internet Networks 2008 SL ku fulin doonto xogta ku dhex jirta mid kasta oo ka mid ah shabakadaha kor lagu soo sheegay waxay noqon doontaa, ugu badnaan, mid ay shabakada bulshadu u oggoshahay astaamaha shirkadaha. Sidaas darteed, Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL way la socodsiin kartaa, marka sharcigu uusan mamnuucin, taageerayaasheeda si kasta ha noqotee in shabakadda bulshadu u oggolaato waxqabadkeeda, soo bandhigiddeeda, dalabkeeda, iyo sidoo kale bixinta adeeg macmiil shaqsiyeed. Soo saarida xogta: Si kastaba xaalku ha ahaadee Shabakadaha Internetka ee AB AB 2008 XNUMX SL waxay ka soo saari doontaa xogta shabakadaha bulshada, ilaa ogolaanshaha isticmaalaha si gaar ah oo cad loogu helo in sidaas la sameeyo. Xuquuqda: Marka ay tahay dabeecadda isku xidhka shabakadaha bulshada, jimicsiga wax ku oolka ah ee xuquuqda dhowrista xogta ee raacaha waxay ku xirnaan doontaa wax ka beddelka astaamaha shakhsiga ah ee tan, Shabakadaha Internetka ee AB ee 2008 SL ayaa kaa caawin doona oo kugula talin doona illaa dhammaadka fursadaha ay leedahay.
Emayl. AB Internet Networks 2008 Adeegga emaylka ee loo yaqaan 'SL' waxaa lagu bixiyaa iyadoo la adeegsanayo adeegyada Sendgrid. Baraha bulshada. AB Internet Networks 2008 SL waxay adeegsataa shabakadaha bulshada Mareykanka ee YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard oo loo gudbiyo xog caalami ah, oo ah falanqeyn iyo dabeecad farsamo la xiriirta websaydhka ku jira server-keeda. in AB Internet Networks 2008 SL ay daaweyso xogta iyaga, iyaga, adeegsadayaasha, macaamiisha ama badmaaxyaashu ugu gudbiyaan shirkadda AB Internet Networks 2008 SL ama ay la wadaagaan. Bixiyeyaasha lacag bixinta. Si aad wax uga bixin karto PayPal o karbaash, Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL waxay u diri doontaa xogta adag ee lagama maarmaanka u ah kuwa kuwaan lacag-bixiyayaashan lacag-bixinta ah si ay u soo saaraan dalab bixinta u dhiganta. Macluumaadkaaga waa la ilaalinayaa iyadoo la raacayo qaanuunkayaga gaarka ah iyo nidaamka cookies. Adoo dhaqaajinaya rukunka ama bixinta macluumaadkaaga lacag bixinta, waad fahantay oo aad aqbashay asturnaantayada iyo nidaamkayaga 'cookies'. Waxaad had iyo jeer xaq u lahaan doontaa helitaanka, sixitaanka, tirtirka, xaddidaadda, qaadista iyo illaawinta xogtaada. Laga soo bilaabo marka aad iska diiwaangeliso isticmaale ahaan boggan, AB Internet Networks 2008 SL waxay marin u leedahay: Magaca isticmaalaha iyo emaylka, cinwaanka IP, cinwaanka boostada, ID / CIF iyo macluumaadka lacag bixinta. Si kastaba xaalku ha ahaadee, Shabakadaha Internetka ee AB Internet 2008 SL waxay xaq u leeyihiin inay wax ka beddelaan, waqti kasta iyo ogeysiis la'aan, laakiin ku wargelinta, soo bandhigidda iyo qaabeynta websaydhka oo ah ogeysiiskan sharci.
Helitaanka iyo / ama adeegsiga websaydhkan waxay u egtahay qof kasta oo sameeya xaaladda isticmaalaha, aqbalida, laga bilaabo xilligan, si buuxda oo aan lahayn Boos, ogeysiiskan sharciyeed ee la xiriira adeegyada qaarkood iyo waxyaabaha ku jira bogga. Markaad isticmaaleyso degelkan, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuusan sameynin dhaqan kasta oo dhaawici kara sawirka, danaha iyo xuquuqda AB Internet Networks 2008 SL ama dhinacyada saddexaad ama dhaawici kara, gabin kara ama culeys ka saari kara bogga ama ka hortagi kara, si kasta oo ay tahay, isticmaalka caadiga ah ee shabakadda.
Boggu wuxuu ka kooban yahay qoraallo loo diyaariyey kaliya ujeeddooyin macluumaad ama macluumaad ah oo aan ka tarjumeyn karin xaaladda hadda jirta ee sharciga ama fiqiga oo tixraacaya xaaladaha guud si aan nuxurkiisu marna u adeegsan karin isticmaaluhu kiisas gaar ah. Fikradaha laga dhiibtay dhexdooda ayaan daruuri ka turjumaynin aragtiyada Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL. Nuxurka maqaallada lagu daabacay bogga lama tixgelin karo, sikastaba, haku baddelo talo sharci. Isticmaaluhu waa inuusan ku dhaqmin salka macluumaadka ku jira bogga isagoon marka hore u adeegsan talobixin xirfadeed u dhiganta.
Iyada oo la adeegsanayo Xaaladahaas Guud, looma wareejin karo xuquuqda lahaanshaha aqooneed ama warshad bogga ama mid ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay, taranka, beddelka, qaybinta, wada xiriirka bulshada, u soo bandhigida dadweynaha, soo saarista, dib u isticmaalida, iyadoo si cad looga mamnuucay Isticmaalaha.Ugudbinta ama adeegsiga nooc kasta, qaab kasta ama habraac, midkastoo kamid ah, marka laga reebo kiisaska ay sharci ahaan u oggol yihiin ama u oggolaanayo qofka haysta xuquuqda u dhiganta. Isticmaaluhu wuu ogyahay oo wuu oggol yahay in websaydhka oo dhan, oo ay ku jiraan astaamo aan dhammaystirnayn qoraalka, sawirrada, naqshadaha, softiweerka, waxa ku jira (oo ay ku jiraan qaabdhismeedka, xulashada, habeynta iyo soo bandhigidda isku mid ah), maqalka maqalka iyo sawirada, waxaa ilaaliya calaamadaha ganacsiga, xuquuqda daabacaadda iyo xuquuqaha kale ee sharciga ah ee diiwaangashan, iyadoo la raacayo heshiisyada caalamiga ah ee Spain ay qayb ka tahay iyo xuquuqda kale ee hantida iyo sharciyada Spain. Haddii ay dhacdo in isticmaale ama dhinac saddexaad u arko in lagu xadgudbay xuquuqdooda sharciyeed ee hantida aqooneed sababo la xiriira soo bandhigidda waxyaabo ka mid ah barta, waa inay ku wargeliyaan AB Internet Networks 2008 SL ee xaaladaha la sheegay, iyagoo tilmaamaya:
Xaaladaha hadda jira ee isticmaalka goobta waxaa lagu xukumaa mid kasta oo ka mid ah xagjirnimadiisa sharciga Isbaanishka. Luqadda qoraalka iyo tarjumida ogeysiiskan sharci waa Isbaanish. Ogeysiiskan sharci ahaan shaqsi ahaan looma xareyn doono isticmaale kasta laakiin wuxuu ku sii xirnaan doonaa internetka internetka. Isticmaalayaashu waxay u gudbin karaan Nidaamka Xalinta Khilaafaadka Macaamiisha ee AB Internet Networks 2008 SL uu qayb ka noqon doono xallinta wixii muran ah ama sheegasho ah ee laga soo qaatay qoraalkan ama waxqabad kasta oo ka socda AB Internet Networks 2008 SL, marka laga reebo xallinta khilaafaadkaas sababa horumarka hawl u baahan xubinnimo, taas oo ay dhacdo inuu adeegsaduhu u aado hay'adda u dhiganta ee ururka qareennada ku habboon. Isticmaalayaasha leh xaaladda macaamiisha ama isticmaalayaasha sida lagu qeexay qawaaniinta Isbaanishka kuna nool Midowga Yurub, haddii ay dhibaato ku qabaan iibsiga khadka tooska ah ee loo sameeyay Shabakadaha Internetka ee AB ee 2008 SL, si ay isugu dayaan inay u gaaraan heshiis maxkamadda ka baxsan tagi karaa Madasha Xalinta Khilaafaadka ee khadka tooska ah, oo ay abuureen Midowga Yurub ayna soo saareen Komishanka Yurub ee hoos imanaya Xeer (EU) 524/2013. Maadaama uusan isticmaaluhu ahayn macaamil ama isticmaale, iyo marka uusan jirin sharci u baahan si kale, dhinacyadu waxay ku heshiiyeen inay u gudbiyaan Maxkamadaha iyo Maxkamadaha caasimadda Madrid, maadaama ay tani tahay meeshii lagu soo gabagabeynayay heshiiska, oo si cad looga tanaasulayo wixii kale xukun u dhigma iyaga.
Helitaanka iyo / ama adeegsiga tan qof kasta oo sameeya xaaladda Isticmaalaha, aqbalida, laga bilaabo xilligan, si buuxda oo aan lahayn boos celin, ogeysiiskan sharciyeed, iyo sidoo kale xaaladaha gaarka ah ee, halka ay ku habboon tahay, ku dhammaystiraya, xiriir la leh qaar adeegyada iyo waxyaabaha ku jira bogga. Isticmaalaha waa la ogeysiiyey, wuuna aqbalay, in marin u helka degelkan uusan macnaheedu ahayn, sinnaba, bilowga xiriirka ganacsi ee AB Internet Networks 2008 SL. Sidan oo kale, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuu isticmaalo websaydhka, adeegyadiisa iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay isaga oo aan ku xadgudbin sharciga hadda jira, niyad wanaagga iyo kala dambaynta bulshada. Isticmaalka websaydhka ujeeddooyin sharci darro ah ama waxyeelo leh, ama in, si kasta oo ay tahayba, ay u geysan karto waxyeello ama u horjoogsato howlaha caadiga ah ee websaydhka waa mamnuuc. Ku saabsan waxyaabaha ku jira degelkan, waa mamnuuc:
Bogagga shabakadda waxay ku siinayaan xiriiriyeyaal degello internet kale u gaar ah iyo waxyaabo ay leeyihiin dhinacyada saddexaad, soosaarayaasha ama alaab-qeybiyeyaasha. Ujeedada kaliya ee xiriiriyayaashu waa in la siiyo Isticmaalaha suurtagalnimada helitaanka xiriidhada la sheegay iyo in la ogaado alaabtayada, in kasta oo AB Internet Networks 2008 SL aysan masuul ka ahayn kiis kasta natiijooyinka laga soo qaadan karo adeegsadaha iyadoo la adeegsanayo xiriiriyeyaasha la sheegay. Isticmaalaha doonaya inuu aasaaso aalad kasta oo farsamo oo xiriirisa oo ka socota degelkiisa iyo bogga waa inuu helaa oggolaanshaha hore ee qoraal ee Shabakadaha Internetka AB ee 2008 SL. Abuuritaanka xiriirku macnaheedu ma aha xaalad kasta oo jirta jiritaanka cilaaqaadka ka dhexeeya AB Internet Networks 2008 SL iyo mulkiilaha barta uu ku xirmay xiriirku, ama aqbalaadda ama oggolaanshaha AB Internet Networks 2008 SL ee ka kooban ama adeegyadeeda.
Shaqada dib u soo kabashada ama ka mid ah dhagaystayaasha AdWords ee la midka ah ayaa noo oggolaanaya inaan la xiriirno dadka horay u soo booqday degelkeenna oo aan ka caawinno inay dhammaystiraan nidaamka iibkooda. Isticmaal ahaan, markaad gasho degelkeenna, waxaan rakibi doonnaa cookie dib-u-soo-celin ah (waxay ka imaan kartaa Google Adwords, Criteo ama adeegyo kale oo bixiya dib-u-eegis).
Isticmaaluhu wuxuu oggol yahay inuu si taxaddar leh u isticmaalo websaydhka iyo adeegyada laga heli karo, iyadoo si buuxda loo waafajinayo Sharciga, caadooyinka wanaagsan iyo ogeysiiskan sharci. Sidoo kale, waxay qaadaysaa, haddaanay jirin, oggolaansho qoraal iyo oggolaansho hore ee AB Internet Networks 2008 SL inay u adeegsato macluumaadka ku jira websaydhka, gaar ahaan macluumaadkaaga, iyadoo aanad awood u lahayn inay si toos ah ama si aan toos ahayn u fuliso dhiig-miirashada ganacsi ee waxyaabaha ay ku jirto marin u helid Boggan wuxuu kaydiyaa feyl xog ah oo la xidhiidha faallooyinka loo diro degelkan. Waad ku dhaqmi kartaa xuquuqdaada helitaan, sixid, tirtirid ama diidmo adigoo u diraya emayl cinwaanka cinwaanka (at) currentblog (dot) com. Boggan, boggaga la xidhiidha iyo lahaanshaha waxa ka mid ah AB Internet Networks 2008 SL. Websaydhkani wuxuu kakooban yahay iskuxirayaal u horseeda degello kale oo ay maamulaan dhinacyada saddexaad ee ka baxsan ururkeenna. AB Internet Networks 2008 SL dammaanad kama qaadin mana masuul ka aha waxyaabaha laga soo aruuriyay boggaga la sheegay. Haddii aan caddeyn, hore iyo qoraal oggolaansho ah AB Internet Networks 2008 SL, soo saarid, marka laga reebo isticmaalka gaarka ah, beddelka, iyo guud ahaan nooc kasta oo dhiig-miirasho ah, iyadoo la raacayo hanaan kasta, dhammaan ama qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira degelkan. Waa mamnuuc in la fuliyo, iyada oo aan oggolaansho hore laga helin AB Internet Networks 2008 SL, wax isdaba marin ama wax ka beddel degelkan. Sidaas darteed, Shabakadaha Internetka ee AB 2008 XNUMX SL ma qaadi doonto mas'uuliyad ka soo baxda, ama taasi waxay ka dhalan kartaa, wax ka beddelka ama wax is daba marinta ay sheegeen dhinacyada saddexaad.
Haddii ay dhacdo in isticmaale kasta uu leeyahay wax su'aalo ah oo ku saabsan sharciyadan ama faallo kasta oo ku saabsan bogga, fadlan la xiriir (at) actualityblog (dot) com. Nidaamkeena asturnaanta wuxuu qeexayaa sida aan u ururino, u kaydinno ama u isticmaalno macluumaadka aan ku ururinno adeegyada kala duwan ama bogagga laga heli karo boggan. Waa muhiim inaad fahanto macluumaadka aan ururinno iyo sida aan u isticmaalno tan iyo markii marin u helka degelkani uu ka dhigan yahay aqbalida siyaasadeena asturnaanta.